I-QEMU 5.0 isilapha futhi lezi yizinguquko zayo ezibaluleke kakhulu | Kusuka kuLinux
Uhlobo olusha lwe-emulator ye-QEMU 5.0 selivele ikhishiwe futhi inezithuthukisi eziningana zokhiye, kanye nokusekelwa okukhulu kokwakhiwa okwengeziwe. Kulabo abangazi ngeQEMU, kufanele bakwazi lokho lokhu kuyi-emulator okukuvumela ukuthi usebenze uhlelo oluhlanganisiwe lwesikhulumi sehadiwe kusistimu enokwakhiwa okuhluke ngokuphelele, ngokwesibonelo, sebenzisa uhlelo lwe-ARM ku-PC ehambelana ne-x86.
Kumodi yokubona Ku-QEMU, ukusebenza kwekhodi esebenzayo endaweni ecezile kuseduze nohlelo lwendabuko ngenxa yokwenziwa okuqondile kwemiyalo ku-CPU nokusetshenziswa kwe-Xen hypervisor noma imodyuli ye-KVM.
QEMU inika amandla ukubonwa ngaphandle kokulingisa, uma uhlelo lwezivakashi isebenzisa iprosesa efanayo nohlelo lokusingathwa noma ukwehluleka lokho kulingisa ukwakhiwa kweprosesa le-x86, ARM, PowerPC, Sparc, MIPS1. Isebenza kuma-x86, x64, PPC, Sparc, MIPS, amapulatifomu e-ARM nakuLinux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Mac OS X, Unix neWindows operating systems.
Kuyo yonke iminyaka yentuthuko, ukusekelwa kungeziwe ukulingiswa okugcwele kwezakhiwo eziyi-14 Okwe-hardware, inani lamadivayisi wehadiwe elilingisiwe selidlulile kuma-400. Ukulungiselela inguqulo engu-5.0, kwenziwe izinguquko ezingaphezu kuka-2800 ngabathuthukisi abangama-232.
Izindaba eziyinhloko ze-QEMU 5.0
Enguqulweni entsha engu-5.0 ingeze ikhono lokudlulisa ingxenye yohlelo lwefayela kusuka kusistimu yokusingathwa kuye kusistimu yezivakashi usebenzisa i-virtiofsd. Isistimu yezivakashi ingakhweza umkhombandlela omakwe ukuthekelisa ohlangothini lomgcini, okuyi yenza lula kakhulu inhlangano yokufinyelela kwabelwane kuzikhombisi-ndlela kuzinhlelo zokwenza okuhle. Ngokungafani nokusebenzisa inethiwekhi FS, njenge I-NFS ne-virtio-9P, i-virtiofs inika amandla ukusebenza eduze kohlelo lwefayela lendawo.
Ngaphezu kwalokho I-EMM yokwakha i-emulator ingeza ikhono lokulingisa ama-CPU we-Cortex-M7 futhi inikeza ukwesekwa kwamabhodi e-PC i-tacoma-bmc, iNetduino Plus 2 ne-Orangepi.
Ukusekelwa okwenziwe kwe ukulingiswa kwezici ezilandelayo zokwakha:
I-ARMv8.1: VHE, VMID16, PAN, PMU
I-ARMv8.2: UAO, DCPoP, ATS1E1, TTCNP
I-ARMv8.3: RCPC, CCIDX
I-ARMv8.4: PMU, RCPC
Umyalo wokulinganisa i-qemu-img manje isingasebenza nezithombe ze-LUKS kanye nenketho I-Target-is-zero ingezwe kumyalo wokuguqula qemu-img ukweqa ukuqeda isithombe esiqondisiwe.
Kungeziwe ukusekelwa kokuhlola kwenqubo ye-qemu-storage-daemon, enikezela ukufinyelela kuzinga lokuvimba le-QEMU nemiyalo ye-QMP, kufaka phakathi ukusebenza ngamadivayisi we-block kanye nesiphakeli se-NBD esishumekiwe, ngaphandle kokuthi uqale umshini ogcwele obonakalayo.
Ku-emulator yokwakha I-PowerPC yemishini ye 'powernv', ukungezwa kwe-KVM hardware kusengezwe ukusebenzisa izinhlelo zezivakashi ze-KVM nge-classic TCG (Tiny Code Generator) code code. Ukulingisa inkumbulo eqhubekayo, ukungezwa kwe-NVDIMM kufakwe kufayela.
I-emulator yokwakha I-RISC-V yamabhodi we-virt nama-sifive_u isebenzisa ukwesekwa kwabashayeli be-syscon Izicelo ze-Linux zokuphathwa kwamandla nokuqalisa kabusha.
Kwezinye izinguquko ezishiwo, okulandelayo kuvela:
Ukusekelwa kokufuduka bukhoma kwedatha yenqubo yangaphandle kusetshenziswa i-QEMU D-Bus
Amandla wokusebenzisa inkumbulo emuva ukuqinisekisa i-RAM enkulu yohlelo lwezivakashi.
I-backend ihlelwe ngenketho "-machine memory-backend"
Isihlungi esisha se- "compress", esingasetshenziswa ukwenza isipele izithombe ezicindezelwe
Ukusekelwa kwamadivayisi we-vTPM kanye ne-virtio-iommu kungeziwe kumishini ye-'buciko 'eyenziwe.
Ikhono lokusebenzisa izinhlelo zokubamba ze-AArch32 ukusebenzisa izindawo zezivakashi ze-KVM yehlisiwe.
Ukusekelwa kwekhonsoli yemidwebo esebenzisa idizayini ye-HP Artist kungeziwe ku-emulator yokwakhiwa kwe-HPPA
Kungezwe ukusekelwa kwesitatimende se-GINVT (Global Invalidation TLB) ku-MIPS emulator yezakhiwo
Kungezwe ukuxhaswa kweGoldfish RTC kwebhodi 'ye-virt'. Kungezwe ukuqaliswa kokuhlola kwezandiso ze-hypervisor.
Kungezwe ukusekelwa kwe-AIS (Adapter Interrupt Suppression) lapho isebenza ngemodi ye-KVM ku-s390 emulator yezokwakha. Ukusekelwa kokufuduka okubukhoma kwedatha yenqubo yangaphandle kusetshenziswa i-QEMU D-Bus.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-QEMU 5.0 isilapha futhi lezi yizinguquko zayo ezibaluleke kakhulu
Ikhishwe inguqulo entsha yohlelo lwefayela olusabalalisiwe IPFS 0.5